China pearlescent mica powder ifektri kanye nabaphakeli | I-Huajing
I-Huajing pearlecent mica powder yenziwa ngama-mica wafers akhethiwe ahlukile kunalawo we-fluorophlogopite ejwayelekile. Ngoba iyi-mica entsha yokwenziwa ngokusebenzisa i-Huajing ifomula elihlukile nemishini yokukhiqiza ukukhiqiza.
Pearl Ibanga mica powder
Into Ukucaciswa kwangaphakathi umbala ubumhlophe (Lab) usayizi wezinhlayiyana D90 (μm) usayizi wezinhlayiyana D50 (μm) usayizi wezinhlayiyana D10 (μm) Ukusebenza
-15 -15μm Mhlophe 98 12 ～ 15 5 ～ 7 2 ～ 4 Uchungechunge lweSiver
5 ～ 25 5-25μm Mhlophe 98 22 ～ 25 10 ～ 13 5 ～ 7 Uchungechunge lwesiliva
10 ～ 40 10-40μm Mhlophe 98 40 kuya ku-42 21 ～ 24 10 ～ 12 Uchungechunge lwesiliva Uchungechunge lomlingo Uchungechunge lweChameleon
10 ～ 60 10-60μm Mhlophe 98 49 ～ 52 25 ～ 28 12 ～ 14 Uchungechunge lwesiliva Uchungechunge lomlingo Uchungechunge lweChameleon
20-120 20-120μm Mhlophe 98 108 ～ 113 58 ～ 60 25 ～ 27 Uchungechunge lwesiliva
40 ～ 200 40-200μm Mhlophe 98 192 ～ 203 107 ～ 110 49 ～ 52 Uchungechunge lomlingo Uchungechunge lweChameleon
60 ～ 300 60-300μm Mhlophe 98 290 ～ 302 160 kuya ku-165 73 ～ 76 Uchungechunge lomlingo Uchungechunge lweChameleon
Ukumelana nokushisa umbala Ubulukhuni bukaMohs ukuvimbela ivolumu ukuphikiswa komhlaba (Ω) Iphuzu lokuncibilika amandla wokubhoboza Mhlophe Ukugoba
Inesici se-fluorine ethambile, esobala futhi ephansi. I-Wafers yona idlula kulezi zinqubo zokukhiqiza ezilandelayo: ukukhetha okukhethekile, ukuhlanza ngebhayisikili, ukugaya ngokucophelela, ukwahlukaniswa kwelungelo lobunikazi le-ultrasonic kanye nokomisa okushisa okuphansi .Lezi zinqubo zivimbele ubuchwepheshe obuningi bokucubungula bokukhiqizwa kwe-mica eminyakeni engama-30 edlule. Ngakho-ke i-mica powder yokugcina inezinzuzo zosayizi ofanayo wezinhlayiyana, isakhiwo esiphelele se-wafer kanye nobukhulu obuphezulu obukhulu. IHuajing zokwenziwa kwe-mica powder kuyisinqumo esingcono kakhulu sochungechunge lwe-pearl pigment crystal, uchungechunge lwe-magica nochungechunge lonwabu.
Ngaphezu kwalokho, i-Huajing mica yokwenziwa konke yenziwe ngokwezifiso ngokuya ngemfuneko yamakhasimende, ubukhulu bayo buqala kusuka ku-10 ～ 900μm.
Yiziphi Izigaba Ezintathu Eziyinhloko ZePearlescent Pigments?
Izindwangu ze-pearlescent zezimboni, izimonyo ze-pearlescent zezimonyo, ibanga lokudla i-pearlescent pigments
Imibala Yezimboni Zamaparelentisi
Imibala icebile kakhulu, kufaka phakathi: ama-classical pearlescent effect pigments, crystal pearlescent effect pigments, coloured aluminium metal effect pigments, high performance pearlescent effect pigments, multi-color pearlescent effect pigments, liquid metal pearlescent effect pigments, colorful glass pearlescent pigments, njll ., esetshenziswa kakhulu ezinengilazini, oplastiki, ukuphrinta, ingilazi nobumba.
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zemakethe, sihlose ukwenza ngcono amakhasimende amasha ekuthuthukiseni ukusebenza kwezingulube ze-pearlescent ukusiza abathuthukisi be-pearlescent pigment baxazulule izinselelo ezahlukahlukene ekusetshenzisweni kwemakethe. Okufana nalokhu: ukusiza ukuthuthukisa amazinga ahlukahlukene wombala we-pearlescent effect pigments, ukuxazulula ngokuphelele imvelo enokhahlo ebhekene nokumbozwa kwezimoto namapulasitiki angaphandle; umbala ongenawo uthuli we-pearlescent pigments uxazulula izinkinga zokungcola kothuli nokusabalalisa kanye nokwakheka kwezingulube ze-pearlescent ngoyinki wokuphrinta; i-anti-yellowing pearlescent pigments ixazulula izinkinga zokuphuphuma kwegumbi elimnyama nokuphuzi kwelanga kuplastikhi Indlela ekhethekile yokwelashwa kwe-pigment ihlangabezana nezidingo zokukhishwa okuphezulu kanye nokufakwa okuphezulu kwe-pigment ekukhiqizeni i-masterbatch yombala wepulasitiki.
Sisebenzisa ngokugcwele ubuchwepheshe bethu ekukhiqizeni i-mica yokwenziwa, siyaqhubeka nokuvula izindawo ezintsha zesicelo se-pigment. Isibonelo, imikhiqizo yesicelo sokushisa okuphezulu yenza ama-pigment amelane nokuhlolwa kokushisa okuphezulu ezingilazini nasezinsizeni ze-ceramic ngenkathi kugcinwa ukuqina kombala kwezingulube.
Umbala wePearlescent Pigment
Ngokuthuthuka okuqhubekayo komkhakha wezimonyo, umphumela nokuthungwa kwemikhiqizo elethwe yizingulube zeparelecent ziba zibaluleke kakhulu. Imikhiqizo yezimonyo yenziwe nge-pearlescent pigments noma ibucayi njengokukhazimula okufana ne-satin, noma icwebezela njengamadayimane. Ukuze kwandiswe ukukhanga kwemikhiqizo, imikhiqizo yokunakekelwa komuntu nayo yaqala ukusebenzisa izingulube zeparelecent ukuthuthukisa ukubonakala kwemikhiqizo noma ukudala umphumela osheshayo wemikhiqizo.
Ama-pearlescent pigments asetshenziswa ekwenziweni kwezimonyo kumele afakwe inzalo emazingeni aphezulu okushisa futhi wonke umugqa wokukhiqiza kufanele ube yi-aseptic.
Isetshenziselwa ukukhiqiza i-pearlescent yesiliva esezingeni eliphakeme kanye nomphumela wokuphazamiseka kombala we-pearlescent, ongeke wengeze umphumela obenyezelayo nokukhazimulayo emikhiqizweni, kepha futhi ngekhono lokuthwebula ukukhanya ukudala imibala ehlukile ye-pearlescent ngokusebenzisa umthetho wokuphazanyiswa.
Isetshenziswe ekukhiqizweni kochungechunge lonwabu, edwetshiwe njengonwabu, ngokusebenzisa ama-engeli wokubuka ahlukene, ungabona ushintsho lombala wesipiliyoni.
Ukudla Ibanga Pearlescent Pigment
Lokho okubizwa ngokudla okumnandi kuhlala kugcwele umbala nokunambitheka, futhi isipiliyoni sokubukwa okunethezeka sihlala sihambisana nesikhathi esihle. Faka kumkhiqizo wakho
Pearl effect pigments, kusuka esiliva, igolide kanye nemiphumela yokuphazamiseka, kuya kumathoni abomvu nansundu ukudala imibala egqamile nokukhazimula okunethezeka, ake sizwe ubumnandi obukhanyayo ndawonye! Hlola umhlaba we-mica ebangeni lokudla ndawonye!
Langaphambilini Izinkampani Zokukhiqiza zeMuscovite Kuthoyizi Elingenabo Ubuthi Nokunambitheka - I-Calcined mica powder - Huajing
I-Mica Based Pearlescent Pigment
Mica Pearlescent Imibala